China's polar icebreaker Xuelong 2 heads to Zhongshan Station on Weddell Sea(1/6)
2020-02-07 11:58:30 Xinhua Editor :Cheng Zizhuo
Photo taken on Feb. 1, 2020 shows icebergs seen from China's polar icebreaker Xuelong 2, or Snow Dragon 2, which is heading to China's Zhongshan Station during China's 36th Antarctic expedition, on the Weddell Sea. (Xinhua/Liu Shiping)
Photo taken on Feb. 2, 2020 shows a whale seen from China's polar icebreaker Xuelong 2, or Snow Dragon 2, which is heading to China's Zhongshan Station during China's 36th Antarctic expedition, on the Weddell Sea. (Xinhua/Liu Shiping)
Photo taken on Feb. 1, 2020 shows a whale seen from China's polar icebreaker Xuelong 2, or Snow Dragon 2, which is heading to China's Zhongshan Station during China's 36th Antarctic expedition, on the Weddell Sea. (Photo by Xia Limin/Xinhua)
Photo taken on Feb. 5, 2020 shows an iceberg seen from China's polar icebreaker Xuelong 2, or Snow Dragon 2, which is heading to China's Zhongshan Station during China's 36th Antarctic expedition, on the Weddell Sea. (Xinhua/Liu Shiping)
Photo taken on Feb. 1, 2020 shows an iceberg seen from China's polar icebreaker Xuelong 2, or Snow Dragon 2, which is heading to China's Zhongshan Station during China's 36th Antarctic expedition, on the Weddell Sea. (Xinhua/Liu Shiping)